Uyihlaziya njani i-WordPress yezehlo yezehlo kwi-iCal usebenzisa iKhalenda kaGoogle (kunye nolunye ugcino lukaGoogle!) | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 30, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule veki ndityikitye indawo yam yobuqu Izinhlelo zeGoogle. Ndifumana intaba yeSpam okoko idilesi yam ye-imeyile ayitshintshanga kwiminyaka kwaye umbuki zindwendwe wam (nangona ndibathanda) baya kubiza i-1.99 yeedilesi kwidilesi ye-imeyile yoKhuselo lweSpam, into ethi inbox yenza simahla. Kananjalo, ngeGmail, usebenza ngobuchule obakhiwe zizigidi zabanye abasebenzisi ke zichanekile!
Ibheji kaGoogle yokuThetha
Kukho izibonelelo ezongezelelekileyo zokuya kwiiGoogle Apps endandingaziqondi, nangona kunjalo! Esokuqala kukudibanisa usetyenziso lukaMyalezo oNgxamisekileyo kaGoogle, obizwa ngokuba yiNtetho, ngqo kwibar esecaleni nge Ibheji kaGoogle yokuThetha.
Kananjalo, ndinayo ngoku Isazisi sikaGoogle, endilumkisa xa ndine-imeyile kwaye, ukusukela namhlanje, idityaniswa neeapp zikaGoogle kwaye indilumkise xa ndinemicimbi yekhalenda ngokunjalo. Sisicelo esincinci kakhulu.
Ungqamaniso lweKhalenda kaGoogle
Mhlawumbi ezona ndaba zinkulu kule veki yayixa umhlobo wam, uBill, ethumele malunga nenkxaso yeKhalenda kaGoogle yeCalDav kunye nokukwazi ukungqamanisa iCal kunye neKhalenda kaGoogle. Ilula kakhulu:
Vula iinketho ze-iCal
Faka idilesi ye-imeyile kaGoogle kunye negama lokugqitha
Ngenisa idilesi yakho yeKhalenda:
Bendingafuni ukwabelana ngekhalenda yam ephambili kwibar yam esecaleni yeWordPress, ke ndongeze enye iKhalenda kwiKhalenda yam kaGoogle emva koko ndiyongeze kwi-iCal nayo. Nazi izikhombisi zokudibanisa iikhalenda zakho zesekondari neICal. I-URL eyahlukileyo.
Ikhalenda kaGoogle yokuDityaniswa kweWordPress
Inyathelo lokugqibela ukufaka ifayile Iplagi yeKhalenda kaGoogle yeWordPress ukongeza iwijethi kwibar esecaleni yakho edlula kwaye ibonise imicimbi kwiKhalenda yakho. Kukho izinto ezithile kule plugin, nangona kunjalo, ekufuneka ihlawulwe:
Bhalisela i Idatha kaGoogle API Isitshixo, uyakufuna ukungena kuseto lwePlagi.
Xa ufaka idilesi yeXML yokondla iKhalenda yakho, qiniseka ukuba utshintsha indawo yokugqibela ye-url 'epheleleyo' ukuze idilesi ibonakale ngoluhlobo:
indawo yakho% 40group.calendar.google.com / public / full
umhlaString = bonisaTime.toString ('dddd, MMMM dd, yyyy');
Isihloko sewijethi asiboniswanga ngokungqinelana neWordPress API kunye nokusebenza okungagqibekanga kwewijethi. Umntu othile wayenomdla ngokwaneleyo ukuba angathumela izilungiso kule Khowudi kaGoogle kodwa ayikakhululwa. Nanku umkhombandlela wokuba yeyiphi ikhowudi buyisela ukulungisa imiba yesihloko sewijethi.
Ngale nto idityaniswe ngokupheleleyo, ngoku ndinokusebenzisa iSazisi sikaGoogle okanye iCal kwaye ndongeze umsitho oza kubonisa kwibar yam esecaleni! Ixesha elithathayo lixhomekeke kuseto lwakho lwangqamaniso phakathi kweICal kunye neGoogle.
tags: ikhalendaikhalenda kaGoogleboku-WordPress
Iingcebiso ngamakhadi eshishini?
Agasti 5, 2008 kwi-8: 29 AM
Oku kwakukuhle! Ukutya kwekhalenda kuluhlu lwam lomnyhadala lolo longezo olugqibeleleyo kwindawo yam yePR- http://www.indy-biz.com!
Kwakhona ukungqina ukuba ungumntu oya kumfo kwiWordPress! Enkosi!
Bekukuhle kakhulu. Uzame iikhalenda zeminyhadala emininzi, akafumananga nto ifanelekileyo. Iplagi ye-wpng kaGoogle yayifanelekile ngaphandle kwamanqaku angasentla. Kwaye, andinalwazi lwe-scripting. Ngoko...
Umbulelo wam osuka entliziyweni.
Epreli 26, 2009 ngo-7: 16 PM
…ndisongeza imibulelo yam kwezi powusta zingasentla….
Imizekelo yakho ebonakalayo ekhawulezayo nesebenzayo ibe luncedo kakhulu kumphathi wewebhu otshintshela kwi-html ukuya kwi-wordpress.